IiBhayibhile ezipheleleyo zeNyaka omtsha
Unyaka omtsha uthetha izinto ezininzi ezahlukileyo kubantu abahlukeneyo, kwaye kukho iindidi zeBhayibhile zonyaka omtsha ezinokusinceda sihambe ngendlela yethu ukuya kumjikelezo omtsha weentsuku ezingama-365. Enoba sibheke ukubeka ixesha elidlulileyo emva kwethu, sifunde ukugcina iinyawo zethu zityalwe emhlabeni namhlanje, okanye sifuna isikhokelo njengoko sihamba kwixesha elitsha ebomini bethu, iBhayibhile inenkqubela yokuNyaka omtsha.
"Ngaba kufuneka uqhelane ukuba uyalibala ..." ngumgca wokuqala kwi- Auld Lang Syne edumile.
Iphawula ngokubeka ixesha elidlulileyo emva kwethu kuNyaka omtsha, kodwa ngokuphathelele ukubeka izinto emva kwethu. Ekupheleni konyaka ngamnye, sichitha ixesha esithile ekuboniseni ukuhamba phezu kwezinto esizifuna ukuhamba kwixesha elidlulileyo kunye nalabo esinokubamba kulo njengoko sihamba phambili. Iindinyana zeBhayibhile zeNtsha zintsha nazo zisinceda sikwazi ukugxila phambili nokuqala ngokutsha:
2 kwabaseKorinte 5:17 - Ngoko ke, ukuba nabani na kuKristu, into entsha ifikile: Omdala uye wahamba, entsha ilapha! (NIV)
KwabaseGalatiya 2:20 - Umntu wam omdala ubethelelwe kunye noKristu. Andiyena mna ohlala, kodwa uKristu uhleli kum. Ngoko ndihlala kulo mzimba wasemhlabeni ngokuthembela kuNyana kaThixo , ondibathandayo waza wanikela ngenxa yam. (NLT)
KwabaseFilipi 3: 13-14 - Bazalwana noodadewethu, andiziboni nje ukuba ndibambe. Kodwa enye into endiyenzayo: Ukulibala into engasemva kwaye ndixinzelele kwizinto ezizayo, ndixinezela ekujoliseni umvuzo wokuba uThixo undibizele ezulwini ezulwini kuKristu Yesu.
Ukufunda Ukuphila Kwelikhoyo
Njengabaselula sichitha ixesha elingapheliyo sicinga ngekamva lethu. Siceba iikholeji, jonga kwimisebenzi ezayo. Siyazibuza ukuba kuya kuba njani ukuhlala sisodwa, sicinga ngokutshata okanye nokuba nosapho. Sekunjalo, sisoloko sikhohlwe kuzo zonke izicwangciso esiphila kuzo.
Kulula ekupheleni konyaka ngamnye ukubanjwa ngokucinga okanye ekucwangciseni ikusasa lethu. Iindinyana zeBhayibhile zeNtsha ezintsha zikhumbuza ukuba nathi kufuneka siphile ngoku:
Mateyu 6: 33-34 - Kodwa kuqala mfune kuqala ubukumkani bakhe nobulungisa bakhe, kwaye zonke ezi zinto ziya kunikwa nawe. Ngoko ke ningakhathazeki ngengomso, ngokuba ngomso uya kuzixhalabisa. Usuku ngalunye lunenkathazo eyaneleyo yalo. (NIV)
Filipi 4: 6 - Musa ukukhathazeka malunga nantoni na; Kunoko, thandaza malunga nento yonke. Tshela uThixo into oyifunayo, kwaye umbulele ngako konke akwenzileyo. (NLT)
Isaya 41:10 - Musani ukoyika, ngokuba ndikunye. Musa ukudimazeka, kuba ndinguThixo wakho. Ndiza kukuqinisa nokukunceda. Ndiza kukubamba ngesandla sam sokunene. (NLT)
Makhe uThixo abekhokele ikamva lakho
Into enye eyenziwa nguNyaka omtsha yenza ukuba sicinge ngekamva lethu. Ininzi yexesha, ukubhiyozela uNyaka omtsha ubuncinane kusenza sicinge ngezicwangciso zethu kwiintsuku ezingama-365 ezizayo. Nangona kunjalo, asikwazi ukulibala isandla sakhe esifanele sibe kwiiplani zethu ezizayo. Asinakuhlala siqonde izicwangciso zikaThixo ngathi, kodwa ezi ndinyana zezibhalo zonyaka omtsha zikhumbuza:
IMizekeliso 3: 6 - Zonke iindlela zakho zingenise kuye, kwaye uya kulungisa indlela yakho. (NIV)
Yeremiya 29:11 - "Kuba ndiyazi izicwangciso endinaso kuwe," utsho uYehova, "uceba ukuphumelela wena kwaye angakulimazi, uceba ukunika ithemba nekamva." (NIV)
Yoshuwa 1: 9 - Ngaba andizange ndiwisele umthetho? Yomelela kwaye ube nesibindi. Sukoyika; Musa ukudimazeka, kuba uYehova uThixo wakho uya kuba nawe naphi na apho uya khona. (NIV)
IVangeli NgokukaMarko, Isahluko 10
Abafazi abanamandla kwi-FAQ FAQ
Umfazi Othabatha Isambatho sikaYesu (Marko 5: 21-34)
UYesu uxela ukufa kwakhe kwakhona (Marko 10: 32-34)
Indlela UIzebhele Eza Kubizwa ngokuba nguKumkanikazi ongendawo
ISV Study Bible Review
Yintoni IBhayibhile Eyithetha Ngayo?
Quit Cute Short
Inyaniso - Inkcazo yesiFrentshi ichazwe
IiComplicated Compounds Inkcazo
Ngubani owafaka uPaintball?
Iiminyaniso zeBhayibhile malunga nokumkela uKristu
Zifundise Indlela Yokuhlamba I-Breaststroke
U-Ovid - Ubume be-Latin Poet
Iingcebiso ze-8 zeYunivesithi yaseCalifornia Imibuzo Yengqondo Yengqondo
I-Generation ye-Third Mustang (1979-1993)
Iyintoni into eyenziwa ngokwesayensi?
Imveliso yasekhaya encangathi
Ubunono & Ukucinga Okucwangcisiweyo
Aztecs okanye iMexico? Liliphi igama elifanelekileyo kwiBukhosi bamandulo?
Ukudala i-Cost Scientist Costume
I-Queen's Top Songs yee-80s
Isikhokelo sokukhetha ukunyanzelisa, amagama anikezela ngcamango ngezobugcisa bakho
I-New England e-Best Patriots DeflateGate Memes
12 Iingoma eziMnandi eziMnandi eziMculo zoMculo kwi-Youtube
Inyaniso (engekho iingoma) malunga neLoch Ness Monster